कस्तो कस्तो दिन पनि आयो हरे जिन्दगीमा
Mon, Apr 23, 2018 | 21:22:24 NST
19:04 PM ( 1 year ago )
दीपा तिमल्सिना/उज्यालो ।
काठमाडौं, पुस ९ – ‘पक्कै पनि दृष्टिबिहीनमा एक प्रकारको शक्ति हुन्छ, आँखा देखिँदैन त्यसैले पनि कान र मन मस्तिष्क जति नै बेला सजग र होसियार रहन्छ’ दृष्टिबिहीनसँग अदृश्य शक्ति हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा गायिका मेनुका पौडेलको जवाफ ।
आँखा नदेख्ने भएपछि कुनै कुरा जान्न परे वा त्यसलाई मनन गर्नुपरे त्यसप्रति नै लगाव हुन्छ । मन मस्तिष्क एकोहोरो हुन्छ र त केही कुरालाई आँखाले हेर्न नसकेपनि मनले छर्लंगै पारिदिन्छ ।
जिन्दगी अहिले सलल बग्दै गरेको नदी झैँ सामान्य हुन सकेको छैन । किनकी खहरे खोलाहरु अझै मिसिंदैछन् । तर निष्ठुरी बनेर जिन्दगीलाई निखार्ने काम भने रोकिएको छैन । सिँढी चढ्दै गर्दा एउटा बिन्दुमा पुगिएको छ । यो विन्दुलाई अझै माथि माथि पुर्‍याउनु छ, किनकी दृष्टिबिहीन सबैका लागि खम्बा बन्नु छ ।
जन्मँदै आँखाको दृष्टि गुमेपछि आमाको न्यानो काख र बाबुको साथ छोडेर अन्जान मानिसको भीडमा मेनुका पुग्नु भयो । सबै नचिनेका मानिस । फेरि उति बुझ्ने पनि होइन, मात्र ४ वर्षको उमेर । तैपनि यति सानो उमेरमा नचिनेकालाई चिन्ने प्रयास मात्रै भएन उनीहरुकै मनमा बस्न सफल हुनुभयो । आफू भन्दा माथिल्लो उमेरका दाई दिदीको माया मात्रै होइन होस्टेलका गुरुका मन जित्न पनि सक्नुभयो ।
सँघर्ष छ, र त जीवन छ ? ‘सँघर्ष नहुँदो हो त म यहाँसम्म कहाँ आइपुग्नु’ मेनुकाले भन्नुभयो । होस्टेलमा आफू भन्दा ठूलाले हार्मोनियम समाएको, गीत गाएको र मादल, तबला बजाएको सुन्दा मेनुकाको मन त्यतै हौसियो । अनि चारै वर्षदेखि सुरु भयो सांगीतिक यात्रा । सुरुका दिन कष्ठकर नै थिए । साना हातले हार्मोनियम समाउनै सक्दैन थियो । सकोस् पनि कसरी आमाको हात समाएर हिँड्नुपर्ने बेला ... ।
संगीतप्रतिको लगाव देखेर अन्तत गुरु र दाई दिदीले नै हार्मोनियम समाएर बजाउन सिकाउनुभयो । त्यतिबेलाका सँगैका दाईदिदी र गुरुलाई सम्झँदै मेनुका कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भावुक बन्नुहुन्छ, ‘मलाई त्यसरी उहाँहरुले नसिकाउनु भएको भए, म कहाँ हुन्थें होला ? जस जसले मलाई सिकाउनुभयो सबैप्रति आभारी, यो मेरो मात्रै होइन सबैको सफलता हो ।’
दुई बहिनी आमा बाबासँगै बस्छन् । आमाको हातले पकाएको खान पाएका छन्, न्यानो काख पाएका छन् । तर पनि रत्तिभर पीर छैन आफूले त्यो नपाएकोमा । सानैमा आमाको काखमा लुट्पुटिएर मात्रै बसेको भए यो रंगिन दुनियाँ कसरी महशुस गर्न पाउनु ?
‘म जे छु त्यसमा नै खुशी र सन्तुष्टि छु । आमाबाबाले होस्टेल नराख्नु भएको भए मैले यो प्लाटफर्म पाउने थिईन । होस्टल दृष्टिबिहीनहरुकै लागि भएकाले मैले त्यहाँ धेरै माया र स्नेहसँगै सिक्ने मौका पाए । एउटा डोर्याउने र टेक्ने बलियो लट्ठी पाएँ । त्यसकै सहाराले यति अग्ला सिँढी चढ्न सफल भएँ ।’
रेडियो नेपालमा देशव्यापी आधुनिक गीत प्रतियोगिता २०७२ मा प्रथम भएकी मेनुकोको घर झापा हो । झापाको दुर्गा उच्च मावि विद्यालय, जहाँ बाल्यकाल बितेको थियो, त्यहीँ संगीतका धेरैजसो आयाम सिक्ने मौका मिल्यो । मेनुका अहिले १८ वर्ष मात्रै हुनुभयो, तर उहाँको आवाज भने पाको, निखारिएको सशक्त र बुलन्द छ । १२ कक्षामा पढ्दै गर्दा सांगीतिक कार्यक्रममा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँ । सांगीतिक क्षेत्रका अग्रजहरुको सरसल्लाहमा उहाँले संगीत विषय लिएर पढ्नु भएको छ । गीतकार एंव साहित्यकार सुवासचन्द्र ढुंगेलको शब्द तथा हरि लम्सालको संगीतमा उहाँले आधुनिक गीत प्रतियोगितामा भाग लिनु भएको थियो ।
बाँच्नलाई, आफैलाई राख्नु पर्यो बन्धकीमा
कस्तो कस्तो ...
तर प्रतियोगितामा भाग लिनु पछाडिको कथा भने अनुमान गरेजति सजिलो छैन । चोट के हो व्यथा के हो भन्ने गीतको फ्यान मेनुकालाई भाग्यले यही गीतका गीतकारसँग भेटाइदियो । जुन भेटले सफलताको स्वाद चाख्ने मौका दियो । अकबरे सुनलाई कस्सी लाउनु पर्दैन भने जस्तै गीतकार ढुंगेलले उहाँको प्रतिभालाई सजिलै चिन्नुभयो । र आफ्नै शब्द दिनुभयो गाउनका लागि । मेनुकाले आफ्नो लगनशीलता र मेहनतले त्यहि गीत गाएर प्रथम बन्नुभयो । यो कुनै एक व्यक्तिको मात्रै नभएकर समग्र दृष्टिबिहीनको सफलता पनि हो ।